माओवादीबाट मन्त्री बन्नेको सूचीमा 'पहिलो महिला छापामार' रोकाको चर्चा | News Nepal
>>दुई युवा स्टारको कप्तानीमा ईपीएको उद्घाटन खेल
>>शान्ति स्थापनार्थ नेपाललाई उच्चपद सुनिश्चित गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आह्वान
>>एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी
>>प्रचण्डसँग चुनाव लड्न तयार छु : बादल
>>दसैंमा घर जाँदै हुनुहुन्छ, कहाँ जान कति लाग्छ भाडा?
माओवादीबाट मन्त्री बन्नेको सूचीमा ‘पहिलो महिला छापामार’ रोकाको चर्चा
काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गठबन्धन सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुमा आकांक्षीको संख्या धेरै भएपछि कसलाई पठाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्ने देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड आफैले सरकारमा मन्त्रीहरुको नाम पठाउन अत्यन्तै सकस पर्ने संभावना देखिएको स्विकार गरिसकेका छन् । तर, माओवादीमा मन्त्रीहरु छान्न सजिलो हुने भने देखिन्न ।
माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री हुनेको सूचीको अग्रपंक्तिमा रुकुम पूर्वबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य कमला रोकाको पनि चर्चा हुन थालेको छ । ​ माओवादी केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमध्ये अहिले मन्त्री नबनेकी नेतृ रोका मात्रै हुन् । कन्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित बीना मगर यसअघि एमाले माओवादी केन्द्रको पर्टी एकता भई बनेको पार्टी नेकपा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा खानेपानी मन्त्री बनिसकेकी छन् ।
भने, ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट पम्फा भुसाल अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा उर्जामन्त्री छन् । माओवादी जनयुद्धमा विभिन्न मोर्चामा संलग्न रहेकी रोकाको पनि देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीको सूचीमा पठाउने नाममा चर्चामा छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड समेत रोकाको बारेमा सकारात्मक रहेको जनाइन्छ । २०३२ साल पुस १५ गते रुकुमको प्वाँङमा अति दुर्गम मगर किसान परिवारमा जन्मिएकी रोका माओवादीले थालेको १० वर्षे जनयुद्धको पहिलो महिला छापामार समेत हुन् ।
माओवादी जनयुद्धमा विभिन्न मोर्चामा अग्रपंक्तिमा लडेकी उनी जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेट कमिसार समेत थिइन् । यस्तै, माओवादीले जनयुद्धको सुरुवात गरेको दिन २०५२ फागुन १ गते रुकुमको राडी प्रहरी चाैकी आक्रमणको क्रममा पहिलो महिला छापामारको रुपमा समेत सहभागी भएकी थिइन् । कथा तथा निबन्ध लेख्ने उनी अमेरिकी पत्रकार जुलीद्वारा निर्देशित बृत्तचित्र ‘सारी सोल्जर’मा रहेका पात्रहरूमध्ये एक हुन् । ‘लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र विकट हिमाली जिल्ला मात्रै नभएर कान्छो जिल्ला पनि भएकाले जिल्लाको सर्वाङ्गीन विकासका निम्ति रुकुम पूर्वले एक पटक मन्त्री पाउँदा ठिक हुन्छ भन्ने मत पार्टीमा पनि बलियो बन्दै गएको छ ।
महिलामा प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्टीका तीन सांसदमा उहाँ मात्रै मन्त्री नबनेकाले पनि यो पटक माैका दिनुपर्छ भन्ने मत पार्टीमा बलियो र पेचिलो बनेको छ । यद्यपी पार्टीले के निर्णय गर्छ आजै भन्न सकिने अवस्था भने छैन्’, रुकुम पूर्वका एक नेताले भने । पार्टी संगठनको काममा जिल्ला भ्रमणमा रहेकी सांसद रोकाले भने पार्टीले न्यायोचित निर्णय गर्नेमा आफू आशावादी रहेको जनाइन् ।
‘पार्टी संगठनको कामको सिलसिलामा जिल्लामा छु । पार्टीले जिम्मेवारी दिएको खण्डमा जस्तोसुकै भूमिका निभाउन तयार छु’, संक्षिप्त कुराकानीको क्रममा रोकाले भनिन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा शीर्ष नेताहरुसंग मन्त्रीको नामावली छिटो दिन आग्रह गरिसकेका छन् । अबको केहिदिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरेर तयारी थालिएपछि मन्त्री को को बन्ने भन्नेबारे छलफल सुरु भइसकेको जनाइएको छ ।
प्रकाशित मिति : 2021-09-10
दोलखा कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रदेश सचिवमा युवा नेता शेर्पाको उमेद्वारी
दोलखा । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा दोलखा जिल्ला क्षेत्रीय प्रदेश `क´ सचिवमा लोकप्रिय युवा नेता नोर्बु शेर्पा...
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभामा भाग लिने सिलसिलामा न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले कुवेतका विदेशमन्त्री डा. अहमद नासेर...
काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल प्रतिष्ठान भवन च्यासलमा जारी बैठक भोलिसम्म चल्नेछ...
चितवन । नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा (बादल)ले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग लड्न तयार रहेको बताएका छन् ।...
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक आजबाट शुरु हुँदै
काठमाडाैं ।नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिठी बैठक आजदेखि शुरु हुँदैछ । तुलसीलाल प्रतिष्ठान भवन च्यासलमा हुने बैठक भोलिसम्म चल्नेछ । बैठकमा...
केपी ओली कम्युनिस्ट होइनन्, मोहन वैद्य र विप्लवसँग पार्टी एकताबारे छलफल भइरहेछ : प्रचण्ड
काठमाडाै । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओली कम्युनिष्ट नै नभएको टिप्पणी गरेका छन्...
काठमाडाैँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पदाधिकारी चयन गरेको छ । आज बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गर्नेगरि पदाधिकारीको नाम टुंगो लगाइएको...
सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्री छान्न सकस, आज पनि बैठक
काठमाडौँ । सरकार गठनको ७० दिन नाघिसक्दासमेत शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । गठबन्धनमा आवद्ध नेताहरुका अनुसार...
काठमाडौँ । संघीय संसदको दुबै सदनको बैठक आज (बिहीबार) बस्दैछ । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो २ बजे एकैसाथ सुरु...